ဒေါ်စုကိုမှူးချုပ်ဟောင်းဦးသန်းရွှေကထောက်ခံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ဒေါ်စုကိုမှူးချုပ်ဟောင်းဦးသန်းရွှေကထောက်ခံ
Posted by Kyaemon on Dec 6, 2015 in History, Myanma News, News | 19 comments
Daw Suu Reconciliation
Myanmar’s ex-dictator tips Suu Kyi as ‘future leader’
Yangon (AFP) – Myanmar’s feared former junta leader Than Shwe has endorsed his one-time nemesis Aung San Suu Kyi asa“future leader” of the country, according to his grandson.
Than Shwe,apostal clerk turned general who ran the country with an iron fist for nearly two decades until 2010, met with democracy champion Suu Kyi on Friday.
Her party is preparing for power after November’s massive election win.
The talks markadramatic turnaround in fortune for Suu Kyi, who was kept under house arrest for years by the 82-year-old retired general for leading the democracy movement against his army.
“Everyone has to accept the truth that Daw Aung San Suu Kyi will be the future leader of Myanmar after winning the elections,” Than Shwe was quoted as saying onaFacebook post late Saturday by his grandson, Nay Shwe Thway Aung….
“I will support her earnestly as much as I can if she really works for the development of the country,” he added, according to the post…..
Many NLD supporters remain cautious ofamilitary that is renowned for its political chicanery and repressive reflexes….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်မြင်မှုပေါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေက အသိအမှတ်ပြု ဟုဆို
အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အောင်မြင်မှုများ အပေါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေက အသိအမှတ်ပြုကြောင်းကို နှစ်ဦးသား တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက် နေ့လည် (၂) နာရီက နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်အမြစ်တွယ်ရေးကို အားပေး ထောက်ခံကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အောင်မြင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေက တွေ့ဆုံစဉ်တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရော နောင်အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ အမြစ်တွယ်ရေးနဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အောင်မြင်ဖို့ ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကို င်းပြပါတယ်၊ နောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေ၊ ပြတ်သားပုံတွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အကြောင်း ပြောတယ်” ဟု ဦးဝင်းထိန်က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်၌ အထိုက်အလျောက် သြဇာရှိသည်ဟု ယုံကြည်ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး သွားရောက် တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်ကြောင်း NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။ (Xinhua)
It was unclear whether Than Shwe’s comments wereacall for the constitution, drafted by his junta in 2008, to be changed to allow the Nobel laureate to become president. She is barred from the highest office because of her sons’ foreign citizenship.,,,,,,
Myanmar’s former military ruler sees erstwhile foe Aung San Suu Kyi as the country’s “future leader” and has pledged support for her inasecret meeting, the general’s grandson said.
Details of Friday’s meeting between the two was revealed by General Than Shwe’s grandson, who acted as intermediary.
He said inaFacebook post the meeting had lasted two-and-a-half hours….
His grandson Nay Shwe Thway Aung quoted him as having said in the meeting: “It is the truth that she will become the future leader of the country,” and “I will support her with all of my efforts”…..
ဦးသန်းရွှေက… ၈၈ နောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်အားလုံးရဲ့ အာခီတက်ခ်ပဲ…။
ဒေါ်စုကို သမ္မတဖြစ်နိုင်အောင်.. သူ့နာဂစ်ခြေဥကြီးထဲ.. Loophole ဘာထား,ထားသလည်းသိချင်မိတယ်…။
အမေ ပြန်ခေါ်ရင်… မြန်မာပြည်မယ်နေနိုင်တဲ့ပုံ…။
နောက်တော့.. ဘုန်းကြီး(အပြီး)၀တ်နေပါကြောင်း…. တဲ့….။
ကျွန်မ တော့ သူ သမ္မတနေရာ ကို စိတ်ဝင်စားပါ့မလားဘဲ။ သမ္မတ လုပ်ရင် ပါတီ က ထွက်ရမယ်။ ဒါဆို သူ့ပါတီ အတွက် အလုပ် လုပ်ဖို့ အားနည်း သွားမယ်။
ပါတီ ဥက္ကဌ က ပိုပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မလားဘဲ။ ကျွန်မ အထင်ပါ။ (လွဲ ဦးမလားဘဲ) :-)))
ထုံးစံ အတိုင်းပါဘဲ။ ဇာတ်လမ်း က စ ပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒီ ကိစ္စ အတွက် အပြစ်တင်မှုတွေ လာနေပါပြီ။
အဲဒီ အတွက် သွားပြီး ရန်ဖြစ်ထားတဲ့ စာသားတစ်ချို့။
ရန်သူကို ချေမှုန်းတာ အသေသတ်မှ ချေမှုန်း တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဖက် ပါအောင် ကိုယ့်ကို ပံ့ပိုး တဲ့ အဆင့်ဖြစ်အောင် မိတ်ဆွေအဖြစ် သိမ်းသွင်းနိုင်တာလဲ ရန်သူ ကို ချေမှုန်းနိုင်တာပါဘဲ။
ကလေး အတွေးလို ငါတို့ နိုင်ပြီ ဒင်းတို့ ကို ဘာေ-ာက် ဂရုစိုက်ရမလဲ လို့ ပြောတဲ့ လေသူရဲကောင်းများ တိုင်းပြည်မှာ တကယ်တမ်း မရှုနိုင် မကယ်နိုင် ဘဝ ရောက်သွားရင် အပြင်ထွက် လူလုံးပြပြီး ဆန့်ကျင်ရဲ မတဲ့လား။
အားလုံး အခုမှ နဲနဲ လူပါးဝ နေနိုင်တာ သိပ်ပြီး လေမကျယ်ကြပါနဲ့။ မြန်မာပြည်ကြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားမှာ ကို ဘာလို့များ မမြင်ချင်ကြပါလိမ့်။
ကိုယ်တွေလဲ အသုံးမကျဘဲ အခုလို အေးချမ်းကာနီးမှ အညိုးအတေး စကား တွေ လာ ပြော မနေသင့်တော့ဘူး။ ဒီလောက် မုန်းပြီး မကြိုက်ရင် ဟိုးနဂိုထဲ က အပြတ်ရှင်းခဲ့ကြပါလားဟယ်။
ကျွန်မ ကတော့ ဒီ အမျိုးသမီးကြီး ရဲ့ ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းအား နဲ့ ပညာဉာဏ် စိတ်ထား မြင့်မြတ်မှု တွေ ကို ယုံပါတယ်။
ကျွန်မ တို့လို သာမာန်ပြည်သူ မမြင်တဲ့ အချက်အလက် တွေ ကို သူ့မှာ မြင်နိုင်စွမ်း ရှိနေတာ မို့ သူ့နောက် ကို သာ အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးပြီး လိုက်ကြဖို့ သာဘဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းတရား အညိုးအတေးစကား တွေ က ခလုတ်ကန်သင်း မဖြစ်ဖို့ သတိပြုကြပါလို့ ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
လပိုင်းလေးကတင်… လူထုအများစုကြီးကရွေးကောက်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က..
၁၉၉၀ ကအာဏာအလုခံရပြီး.. အကျဉ်းချခံလိုက်ရသူကိုယ်တိုင်က… ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေသင်ပုန်းချေပြီး.. သဘောတူကြည်ဖြူလို့..ချိန်းတယ်..။ တွေ့တယ်..။ပြောတယ်..။ ဖိုးလပြည်ပိုက်ဆံစက္ကူလေးပေါ်တောင်.. လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သေး…။
ကျိန်စာ… ကျိန်စာ…. ကျိန်စာရယ်လို့..။
မြန်မာစိတ် လို့ တော့ မပြောလိုပါဘူး သူကြီးရာ။
လူတစ်ချို့ စိတ် တွေ က ငါစွဲ ကြီးလွန်းပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရာ မှာ ဆိုရင် သူကြီးမင်း ဘာလုပ်မလဲ။
ဦးသန်းရွှေ နေရာ မှာ ဆိုရင် သူကြီးမင်း ဘာလုပ် မလဲ။
သူကြီးမင်း စိတ် နဲ့ ဖြေရမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။
သူတို့ နေရာ အစစ် ကို မှန်းတွေးပြီး အဲဒီနေရာ က ခံစားပြီး ဖြေခိုင်းတာပါ။ :-)))
သင်ပုန်းချေရေးကိုတော့.. ပြီးခဲ့တဲ့လ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းမှာကို ထည့်ရေးထားတယ်..။
ဒါက အကောင်းဆုံးအဖြေပဲ…။ အများးးးးစုလူထုကြီးအတွက်.. win-win ပဲ..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာမှာရှိနေရင်.. ဒေါ်စုနဲ့တူတူ ဖြစ်နိုင်လုပ်နိုင်မယ်ထင်ပေမယ့်…
ဦးသန်းရွှေနေရာမှာ… ဒီလိုလုပ်(ပြ) သွားတာကိုတော့ အံ့သြမိတယ်…။
၂၀၂၀မှာ တိုင်းပြည်အကောင်းဖက်ရောက်သွားမယ်ဆို… ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုတောင်…မှန်းနိုင်လောက်တဲ့လုပ်ချက်ပါပဲ…။
တောင်အာဖရိကမှာ.. မင်န်ဒဲလားငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုကို.. ၁၉၉၃က.. သူတယောက်ထဲရတာမဟုတ်…။ အဲဒီတုံးက အဖြူအစိုးရခေါင်းဆောင် ဒီကလပ်ခ်နဲ့တွဲရတာဖြစ်ပါတယ်..။
ကမ္ဘာက.. ဒီလိုလူတွေကို.. မေ့ထားလေ့တော့မရှိ..။
အဖြေလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ သူကြီးမင်း။
မြန်မာပြည် ရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေက ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မဖြစ်ဖူးသေး တဲ့ အကွက်တွေ ဖြစ်လာသလိုပါဘဲ။
ကျွန်မတော့ စစ်တုရင်ခုံပေါ်က အရုပ်လေးတွေ ကိုဘဲ မြင်နေတော့ တယ်။
ကျွန်မ ကတော့ ကိုယ့်ဟာကို ဖိုးလပြည့် နဲ့ အင်မတန် ရင်းနှီးနေမဲ့ ခရိုနီကြီး တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ရဲ့ နေရာမှာ ဝင်ပြီး လှုပ်ရှားကြည့်မိတယ်။
အဲဒီ တစ်ခုသောနာမည် ကို ကြားရုံ နဲ့တင် ခါးခါးသီး မခံနိုင်တဲ့ လူကြီး တစ်ယောက် ဆီ ဘယ်လို ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံစံ နဲ့ နားဝင်ချို သွားစေအောင် လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကိုပါ။
ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကို သတိရမိတယ်။သမီး ရွှေအိမ်သည်ကို စစ်ရှုံးဘုရင် မနူဟာရဲ့သားနဲ့ပေးစားတာ။ သားတော် ရာဇကုမာ ကို ကျော်ပြီး မြေးတော် အလောင်းစည်သူကို အိမ်ရှေ့ပေးတာ။
ကိုယ်ကျိုးထက် ငြိမ်းချမ်းဖို့ ရှေ့တန်းတင်တာ။
(Font ဖွန့် ချင်းမတူလို့ Link လင့်ကိုနှိပ်ပြီးဘတ်ပါရန်)
ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး ဟောငျး သနျးရှေ က လူထုကနေ မဲပေး ရှေးခယျြ ခဲ့တဲ့ NLD ဥက်ကဋ်ဌ အပျေါ မှာ သူ့ အနနေဲ့ ကူညီ မှုတှေ ပွုလုပျမှာ ဖွဈကွောငျး ပွောကွား ခဲ့တယျ လို့ မွေးဖွဈသူ ကို နရှေသှေေးအောငျ ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျ စာမကျြနှာ မှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျ ဘကျက လညျး နိုငျငံ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျ ရေး အတှကျ အငွိုး အတေး အာဃာတ တှေ မထားဘဲ စဈတပျနဲ့ ပူးပေါငျး လုပျဆောငျ သှားမှာ ဖွဈတယျလို့ ပွောကွား ခဲ့ကွောငျး သိရ ပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျ ကို နိုငျငံရဲ့ အနာဂတျ ခေါငျးဆောငျ အဖွဈ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး ဟောငျး သနျးရှေ က သုံးနှုနျး ချေါဝျေါ တဲ့ အတှကျ ကွိုဆိုကွောငျး၊ NLD ဘကျက အောငျနိုငျမှု တှေ ရတဲ့ အတှကျ သူတို့ ဘကျက ဒီလို ပွောခြိနျ ရောကျလာပွီ ဖွဈကွောငျး NLD ဗဟိုအလုပျ အမှုဆောငျ ကျောမတီဝငျ ဦးဝငျးထိနျက ပွောပါတယျ။
ဒီလို တှဆေုံ့မှုတှေ ဟာ အခြိနျကိုကျ တှဆေုံ့မှုတှေ ဖွဈတယျ လို့လညျး ဆိုပါတယျ။
အမြိုးသား ပွနျလညျ ရငျကွားစေ့ ရေး အတှကျ ဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျ က ဆကျလကျ ကွိုးပမျးသှားမယျ လို့လညျး သူက ပွောပါတယျ။
တွေ့ဆုံပွဲတွေနဲ့ ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဟောင်း သန်းရွှေ က လူထုကနေ မဲပေး ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌ အပေါ် မှာ သူ့ အနေနဲ့ ကူညီ မှုတွေ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့တယ် လို့ မြေးဖြစ်သူ ကို နေရွှေသွေးအောင် ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာ မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဘက်က လည်း နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး အတွက် အငြိုး အတေး အာဃာတ တွေ မထားဘဲ စစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဟောင်း သန်းရွှေ က သုံးနှုန်း ခေါ်ဝေါ် တဲ့ အတွက် ကြိုဆိုကြောင်း၊ NLD ဘက်က အောင်နိုင်မှု တွေ ရတဲ့ အတွက် သူတို့ ဘက်က ဒီလို ပြောချိန် ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း NLD ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
ဒီလို တွေ့ဆုံမှုတွေ ဟာ အချိန်ကိုက် တွေ့ဆုံမှုတွေ ဖြစ်တယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ ရေး အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် က ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမယ် လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
တတျ နိုငျ သလောကျ ပံ့ပိုး မယျ ဆိုတဲ့ ဗိုလျခြုပျမှုးကွီး ဟောငျးရဲ့ ပွောဆိုမှု ဟာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို သမ်မတ ဖွဈနိုငျခှငျ့ က နေ အတားအဆီး ဖွဈနစေတေဲ့ အခွခေံ ဥပဒေ ပါ ကနျ့သတျခကျြ ကို ပွငျဆငျ ပွောငျးလဲရေး မှာရော ကူညီမယျ ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျလား ဆိုတာ တော့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မရှိပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးဟောင်းက ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးမှာရော ကူညီမှာလား
တတ် နိုင် သလောက် ပံ့ပိုး မယ် ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟောင်းရဲ့ ပြောဆိုမှု ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ခွင့် က နေ အတားအဆီး ဖြစ်နေစေတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ပါ ကန့်သတ်ချက် ကို ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲရေး မှာရော ကူညီမယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လား ဆိုတာ တော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိပါဘူး။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ ဆောင်ရွက် သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟာ အသက် ၈၂ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး အခုအချိန်အထိ ဩဇာ လွှမ်းမိုး နေနိုင် တုန်းပဲ လို့ မြန်မာပြည် ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် ဂျိုနာ ဖစ်ရှာ က ပြောပါတယ်။
နိုင်အုံးမယ် ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒေါ်စုက မှူးချုပ်ဟောင်း
“He accepts that she will become the leader of the country,” Nay Shwe Thway Aung said of his grandfather inamessage posted on Facebook on Sunday.
The comment came two days after Than Shwe met Suu Kyi, who led her National League for Democracy (NLD) party toalandslide win last month, for more than two hours at military headquarters in the capital Nay Pyi Taw.
Than Shwe, who ruled Myanmar with an iron fist from 1992 to 2001, kept Suu Kyi under house arrest for most of his 19 years in power.
Even though Than Shwe has no official role today, and has been out of the public eye since 2011, many in Myanmar believe he still remains politically involved behind the scenes.
“U Than Shwe recognises NLD’s victory, and talked with chairperson Aung San Suu Kyi about layingasolid foundation for democracy in the country,” Win Htein added.
ဒေါ်စုက အားတက်တရော ဝမ်းသာမိကြောင်း
After Friday’s meeting with Gen. Than Shwe, who nominally retired in 2011, NLD executive committee member Win Htein on Sunday described Ms. Suu Kyi as upbeat about the prospects for forming an effective government.
Political analysts in Myanmar believe Gen. Than Shwe, who is now 80, still exerts considerable leverage behind the scenes as the country gradually feels its way towardamore democratic future, but rarely makes public appearances. His grandson, Nay Shwe Thway Aung, wrote on Facebook after Friday’s meeting with Ms. Suu Kyi that Gen. Than Shwe had said: “It is the truth that she will become the future leader of the country.”
It isn’t clear whether these remarks indicatearedrafting of Myanmar’s constitution to allow Ms. Suu Kyi to become president, oracompromise on other issues, such as the military’s control of the important defense and home ministries.
But when taken in combination with Gen. Min Aung Hlaing’s pledge last week to cooperate with the incoming government, Ms. Suu Kyi’s meeting with Gen. Than Shwe appears to support the view among some analysts that Myanmar’s military views the Nov. 8 election as an opportunity to recast its reputation. Richard Horsey,aYangon-based independent analyst, for instance, has said the military is eager to be seen as the institution that allowed democracy to flourish in Myanmar.
That said, it is unclear whether amending the constitution to allow Ms. Suu Kyi to become president wasatopic at any of her conversations with Gen. Than Shwe, Gen. Min Aung Hlaing or President Than Shwe, who is alsoaformer general.
.ကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာဖို့ အုတန်းချွေတို့ဘက်က ဦးတည်ကြပါစေလေ့—
အဲ့လိုတွေ ဦးတည်ရင် ကောင်းပါလေ့—
ငါတို့က မင်းကို ကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် နေရာပေးရတော့မှာပေါ့နော်…
မင်းညှိနှိုင်းပေးလို့ လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်အိုကြီး ပြေလည်မှုရတယ်ဆိုတဲ့ အချိုးတော့ မလုပ်နဲ့လကွာ..
မင်းကို လူထုကြားထဲ နာမည်ကောင်းလေးနဲ့ရောက်အောင် တတ်နိုင်သမျှ တွန်းပို့တဲ့ မင်းအဘိုးကို ရိုရိုသေသေရှိခိုးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်..
ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့ အာဃာတကို မင်းတို့ကြောက်စရာမလိုပါဘူး..
အရိုးတွန်သံတွေနဲ့ အသက်ဝင်လာမယ့် ဥပဒေကိုပဲ မင်းတို့ကြောက်ပါ.ညီလေး..
သမိုင်းရဲ့ သက်သေတွေက မင်းတို့ကို စီရင်လိမ့်မယ်..
အဲဒီအခါ ငါတို့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး..
Copy from ; မဟာမိုင်း
အဲဒီလို စကား တွေ က ဟန်ရှိပြီး အဆံ မရှိ ဖြစ် နေတာ မို့ ဒီ လောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ တွင်း ထဲက မထွက် နိုင်တာ။
လေသေနတ် တွေ ရပ်သင့်ပြီ။
မြန်မာတိုင်းမ်း Myanmar Times ကပါ
ဒေါ်စုသမတ ဖြစ်ဘို့ တဆင့်ပိုနီးစပ်သွား
နောက်ကွယ်ရာမှာ ဘယ်သူက ကြိုးစွဲနေတာကို
သဘောတူမှ (ပြန်ပြုပြင် ဖြေပေးမှ) ရမှာ
ကြံ့ဖွတ်အသင်းဝင်၊ လက်ရှိဝန်ကြီး အချို့ ကို
အစိုးရအဖွဲ့မှာနေရာပေး တာမျိုး အပေးအယူလုပ်မှ
တွေရဲ့လုံခြုံရေး တရားစွဲမှု မှကင်းလွတ်ရေး အာမခံ
“Everyone has to accept the truth that Daw Aung San Suu Kyi will be the future leader of Myanmar after winning the elections,” former Senior General U Than Shwe was quoted as saying in his grandson’s Facebook post on December 5.
“I will support her earnestly as much as I can if she really works for the development of the country,” said the 82-year-old ex-general who ruled from 1992 until handing over power toamilitary-backed government in 2011.
The surprise encounter came just two days after the NLD leader met President U Thein Sein and Commander-in-Chief Senior General Min Aung Hlaing to discuss the transfer of power following her party’s landslide win in the November 8 parliamentary elections.
U Yan Myo Thein,apolitical commentator, said the possibility of Daw Aung San Suu Kyi becoming president has risenanotch since her meeting with the former junta leader. “The building of trust now has more potential,” he said. But any deals should be made public, otherwise they can be easily broken with no witnesses, he added.
The 2008 constitution written by U Than Shwe’s junta was designed to keep the presidency out of the hands of Daw Aung San Suu Kyi withaprovision barring candidates whose spouse or children are foreign citizens. His junta and its predecessor kept her under house arrest foratotal of 15 years.
Political editor U Aye Thu San said that despite the denials by the Tatmadaw and the government of U Than Shwe’s power, it was clearer now who was the “player behind the scenes”.
“I think there isaray of hope that Daw Aung San Suu Kyi becomes president,” he said.
Changing the constitution would require the consent of the military which maintains an effective veto through its control of 25 percent of seats in parliament.
Analysts said the outlines ofapossible deal over the presidency and future power sharing would possibly include guarantees of no retribution for serving as former generals, and inclusion of members of the defeated Union Solidarity and Development Party in the next NLD-led government.
The parameters ofafuture peace deal with armed ethnic organisations would also be on the table, with the military demanding no threat to Myanmar’s territorial integrity.
U Than Soe Naing,apolitical analyst, said U Than Shwe’s reported comments had given hope to the public. But doubts remained from the outcome of just one meeting.
“The possibility of Daw Suu becoming president will also depend on how she will craft the government structure. The inclusion of current ministers, some members of the USDP, will haveabearing for her presidency,” he said. …..
However, U Tin Oo, the veteran NLD patron who is alsoaformer commander-in-chief of the military, sought to play down expectations.
“It isagood sign. But there were no specific details discussed during the meeting. It wasacourtesy meeting and nothing extraordinary was discussed or agreed,” he said afteraNational Day event at the NLD’s headquarters in Yangon.
အခုတော့ လေရဲမိုး နှင့် အပေါင်းအပါများ လဲ
ဟိုဘက် ကို ဖားရ ဒီဘက် ကို ဖိရ ။ အခုတော့ ဟိုလူ့ အဘ ခေါ်ရမလို ဒီလူ့ဘဲ အဘ ခေါ်ရမလို ကြားညပ်ပြီး
သူရို့နည်း သူရို့ဟန် ဖြင့် ဆတ်ဆတ်ခါ နာ ကြလေပြီ။
သူ့ခမြာလဲ ကိုယ့်စိတ် နဲ့ ကိုယ့်ခံယူချက် နဲ့ မဟုတ်မှန်း သက်သေပြပြီး ရင်း ပြရင်းပါဘဲ။
အခြေအနေ ကြည့်ကြည့်ပြီး ဆွရဖွရ တာ။
သူ့ ဘဝ က လက်ရှိ စစ်တပ် က လဲ မဟုတ်ဘဲ နဲ့ ဒီလို အချိန်မျိုးမှာတောင် မှ တပ်ကို ချစ်သယောင် ဟန်ပြပြီး စစ်တပ် နဲ့ ပြည်သူကြား သွေးခွဲ နေဆဲ။
တစ်ချို့ ဒီမို ဟန်ဆောင်ပြီး သွေးခွဲ တာ ထက် စာရင် နဲနဲ ပို အဆင့်ရှိသေးတယ် တော့ ဆိုချင်ပါတယ်။
သူ့ကြည့်ရတာ ဦးနေဝင်း မြေး ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် ဖြစ်နေတာ ထင်တာဘဲ။
ကိုညွန့် အတွက်လဲ ပါရမှာပေါ့။
တကယ်တော့ လူ တွေ က တိုင်းပြည်ကို ဘန်းပြပြီး ကိုယ့် အတ္တ နဲ့ ကိုယ့် အဖွဲ့အစည်း ကို ရှေ့တန်းတင် နေကြတာ စိတ်ပျက်စရာဘဲ။
ကိုယ့်လူ၊ သူလူ စည်းခြား၊ စည်းတား နေသူ တွေ များ နေသ၍ တော့ ဆက် သွားကြပါ။
ဒီ စိတ်ဓာတ်တွေ အတိုင်း။ တိုးတက်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ :-(((